Vietnam: Nangataka Ireo Mpisera Aterineto Mba Hanampy Azy Hitady Ny Zanany Tsy Hita Ny Raim-pianakaviana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2018 19:51 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, Nederlands, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, English
Dimy ambinifolo taona lasa izay (2010) no nahita farany ny zanany vavy dimy taona antsoina hoe Nguyen Truong An i Nguyen Minh Chau avy any Vietnam. Efa nandeha tany amin'ny toerana maro toy ny tany an-tanàndehiben'i Ho Chi Minh , ny faritanin'i Binh Duong, ary tany Laos mihitsy aza izy mba hitady ny zanany vavy. Niseho tao amin'ny fahitalavi-pirenena sy ny onjam-peo ihany koa izy mba hangataka fanampiana. Saingy tsy nahita ny zanany vavy izy. Nangataka ny fanampian'ireo mpisera ity raim-pianakaviana efa kivy nitady ny zanany vavy efa hatry ny ela ity.
Tamin'ny volana Janoary 2010, nampian'ny havany tamin'ny famoronana tranonkala i Chau mba hanangonana ny fanadihadiana sy ny tatitra momba ny zanany tsy hita. Ity ambany ity ny hafatra fampidirana nataon'i Chau
Manantena i Chau fa afaka hanampy azy ny vondrom-piarahamonina an-tserasera. Notantarainy io faniriana io nandritra ny antsafa niarahany tamin'ny Vietnam Bridge.
23 ora izayHong Kong (Shina)